New Oriental Education သည် ဘာသာစကား နှစ်မျိုး သုံး တိုက်ရိုက် e-commerce ကိုအသုံးပြု သည် - Pandaily
New Oriental Education သည် ဘာသာစကား နှစ်မျိုး သုံး တိုက်ရိုက် e-commerce ကိုအသုံးပြု သည်
Jun 13, 2022, 13:55ညနေ 2022/06/13 14:01:22 Pandaily
Huitun အချက်အလက်များအရ “Oriental Optional” ကိုကြည့်ရှု သူ အရေအတွက်New Oriental Education Official Live Roomဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ၁၂. ၇ ၄၆ သန်း သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း နေ့စဉ် ကုန်ပစ္စည်း သည်ယွမ် ၂၁ သန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃. ၁၂ သန်း) ရှိပြီး တုန်လှုပ် နေသော အသံ တွင် အဆင့် ၆ တွင်ရှိသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်တွင် New Oriental သည် စိုက်ပျိုးရေး ထုတ်ကုန်များ ရောင်းချ ခြင်း ကိုအဓိက ထားသော “Oriental Optimization” တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့် သည့် ပလက်ဖောင်း ကိုစတင်ခဲ့သည်။ အစောပိုင်း အဆင့် များတွင် လူထု ဆွေးနွေး မှုများသည် ကုမ္ပဏီ တည်ထောင်သူ Yu Minhong ၏ ကိုယ်ပိုင် ထင်မြင် ချက်များနှင့် ကျော်ကြား သူများနှင့် စကားစမြည် ပြောဆို ခြင်းအပေါ် အာရုံစူးစိုက် ခဲ့သည်။
ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် အင်္ဂလိပ်စာ ဆရာ Dong Yuhui သည် ၈ နှစ်အတွင်း ကျောင်းသား ၅၀၀, ၀၀၀ ကို သင်ကြား ပေးခဲ့ သည်ဟုဆိုသည်။ သူသည် အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့် ရောင်းချ သော ထုတ်ကုန်များ၏ ဝိသေသလက္ခဏာများ ကိုမည်သို့ ဖော်ပြ ရမည် ကိုရှင်းပြ ရန် whiteboard ကို ကျွမ်းကျင် စွာ အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤနည်း အားဖြင့် Dong နှင့် Dongfang Select များသည် လူကြိုက်များ လာသည်။ နောက်ဆုံးပေါ် အချက်အလက်များအရ ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် Oriental Optimization သည် ခန့်မှန်းခြေ ရောင်းအား ယွမ် ၁၉. ၂ ၁၇၀၀ အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ ထုတ်လွှင့်မှု အစ မှ အဆ ၄၀ တိုးလာပြီး အွန်လိုင်း ကြည့်ရှု သူ ၈၈, ၆၀၀ အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။
တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့် သည့် ရုပ်သံလိုင်း မှ Dong Yuhui (ဓာတ်ပုံ ရင်းမြစ်-Sina)
ဇွန်လ ၁၀ ရက်နှင့် ၁၁ ရက်တို့တွင် Dongfang Options တွင် တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့် သူ ခုနစ် ယောက် သို့မဟုတ် ရှစ် ယောက် ရှိခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ အားလုံးသည် ကုန် ပစ္စည်းများကို ဘာသာစကား နှစ်မျိုး ဖြင့် ရောင်းချ ရန် ရွေးချယ် ခဲ့ကြသည်။ သူတို့၏ ကုန် ပစ္စည်းများကို သူတို့ ရောင်း သည့် နည်း များ၊ ကိန်းဂဏန်း များနှင့် အသွင်အပြင် များမှာ ကွဲပြား သော်လည်း ၎င်းတို့ အားလုံးသည် ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြ ကြသည်။
ကုမ္ပဏီ တည်ထောင်သူ Yu Minhong သည် တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့် မှုအတွက် ရှင်းလင်းသော အကြံဥာဏ် ရှိ သည်မှာ ထင်ရှားသည်။ မေလတွင် သူက New Oriental ပညာရေး နောက်ကွယ် တွင် စနစ် နှစ်ခု ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ပထမ တစ်ခုမှာ အရောင်း စနစ် ဖြစ်သည်။ ဒုတိယ တစ်ခုမှာ ပြင်ပ ထုတ်ကုန်များ နှင့်၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင် ထုတ်ကုန် စာကြည့်တိုက် များအပါအဝင် ထုတ်ကုန် စနစ် ဖြစ်သည်။
ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့တွင် ကုမ္ပဏီသည် စာအုပ် များ၊ သင်ကြားရေး ပစ္စည်းများနှင့် သင်တန်း များအပါအ ၀ င် ပညာရေးဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များကို ရောင်းချ မည့် “New Oriental Live” အဖွဲ့ ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:New Oriental Education သည် ပညာရေး ထုတ်ကုန် အရောင်း ပလက်ဖောင်း တစ်ခု တည်ထောင် သည်
တရုတ် အစိုးရသည် “နှစ်ဆ လျှော့ချခြင်း” မူဝါဒ ကိုအကောင်အထည်ဖော် ပြီးနောက် ပြည်တွင်း ပညာရေး ကုမ္ပဏီများသည် K12 စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ကိုဖျက်သိမ်း ပြီး သူတို့၏ ပုံစံ များ ကိုပြောင်းလဲ ခဲ့ကြသည်။ ယခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် Puxin Education သည်တရုတ် အမြန် အစားအစာ စားသောက်ဆိုင် များ ၏စီးပွားရေး ကိုအကဲဖြတ် နေသည်ဟု ကြေငြာခဲ့သည်။
TikTok အစီအစဥ္မွ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ Live Shopping ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္စီး၀င္ရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ခ်ီတက္မည္
ကဏ္ဍ ခွဲမထား Feb 11
New Oriental Education: တည်ထောင်သူ Yu Minhong ၏ ကိုယ်ပိုင် ဘလော့ဂ် ပို့စ် သည် ကုမ္ပဏီ ၏အမြင် များကို ကိုယ်စား မပြု ပါ
New Oriental Education သည်ဟောင်ကောင် စတော့အိတ်ချိန်း (HKEx) တွင် တနင်္လာနေ့က ကြေငြာခဲ့သည်။ ဒါရိုက်တာ ဘုတ် အဖွဲ့က မကြာသေးမီက ကုမ္ပဏီ နှင့်ပတ်သက်သော မီဒီယာ အစီရင်ခံစာ များသည် ကုမ္ပဏီ၏ စီးပွားရေးနှင့် ဘဏ္ performance ာရေး စွမ်းဆောင်ရည် နှင့်ဆက်စပ် နေသည်ဟု မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
ကဏ္ဍ ခွဲမထား Jan 11 ဇန်နဝါရီ 11, 2022
တရုတ် ကျူရှင် ကုမ္ပဏီ Tal ၏ ပညာရေး ၀ င်ငွေသည် တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၈. ၈% ကျဆင်း ခဲ့သည်
တ႐ုတ္ ပုဂၢလိက က်ဴ ရွင္ ကုမၸဏီ TAL Education က ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၃၀ ရက္မွာ ကုန္ဆံုး မယ့္ ၂၀ ၂၂ ဘ႑ာႏွစ္ တတိယ သံုးလ ပတ္ အတြက္ စာရင္း မစ စ္ ေဆး ရေသးတဲ့ ဘ႑ာေရး ရလဒ္ ေတြကို တနလၤာေန႔က ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။
Industry Feb 22 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 22, 2022
New Oriental Education သည် ပညာရေး ထုတ်ကုန် အရောင်း ပလက်ဖောင်း တစ်ခု တည်ထောင် သည်
ဗုဒ္ဓဟူး နေ့တွင် New Oriental Education ကို တည်ထောင်သူ Yu Minhong က ၎င်း ၏တရားဝင် WeChat အကောင့် တွင် တင် ထားသော ပို့စ် တစ်ခုတွင် တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့် ခြင်း နယ်ပယ်တွင် ကုမ္ပဏီ၏ ရှာဖွေရေး ဦး တည်ချက်ကို ဖော်ပြခဲ့သည်။
ကဏ္ဍ ခွဲမထား Jun 08 ဇွန် 8, 2022